Plastic Izingxenye Bins, Izingxenye Isitoreji Bins, Plastic yokubeka imigqomo - Guanyu
I-QINGDAO GUANYU PLASTIC CO., LTD
Umhlinzeki Ohamba Phambili Kazwelonke Wokuphathwa Kwezinto Nezisombululo Zesitoreji.
Amashini amabhini, ama-rackings namakhabethe
Guanyu yasungulwa e Qingdao ngo-1997, waqala ngemikhiqizo plastic ibhizinisi wholesale. Ngemizamo eqhubekayo nokuzinikela kweminyaka engama-20 ekwakheni imikhiqizo yokuklama nokukhiqiza, inkampani iguqulwe ngempumelelo yaba umhlinzeki oholayo kazwelonke wokusingathwa kwempahla nezixazululo zokugcina.
Sinikeza izixazululo eziphelele zesitoreji ezingxenyeni ezibalulekile zeziqukathi zepulasitiki, amashelufu kanye nezinhlelo zokubhaka, imigqomo yokugcina impahla, amaphalethi epulasitiki, onodoli, imishini yokusebenzela kanye nezinsizakalo ze-OEM kukho konke
Izinkampani zeGlobal 500 zikhetha iGuanyu njengomlingani wazo
Zibandakanye embonini yesitoreji sepulasitiki eminyakeni engama-24
Wina amalungelo obunikazi angama-45 bese kuthi lawo mahlanu awasungule
I-ISO 9001,14001,45001 iqinisekisiwe; Finyelela, ROHS, FDA
Sebenzisa izinto ezingama-100% ezingaphinde zisebenze zepulasitiki.
Ukubuya kwamakhasimende eGuanyu kuhlala kukholwa ukuthi ukwaneliseka kwamakhasimende kubalulekile njengokuphila. Namuhla, silandelela ikhwalithi yomkhiqizo weLiqun Pharmaceuticals. Saxoxisana nabasebenza phambili ...
Ungayikhetha kanjani i-tur yekhwalithi ...
Ibhokisi lokungenisa imali lidlala indima ebaluleke kakhulu embonini yokugcina impahla kanye nasekulungisweni kwempahla. Ibhokisi lenzuzo lingasebenzisana neziqukathi zokuphathwa kwezinto nezindawo zokusebenza ukusiza amabhizinisi aqedele ...
Indima yethenda lepulasitiki ...
Obhasikidi bezinga eliphakeme lokuphuma kwepulasitiki ikakhulukazi benziwe nge-polypropylene entsha eluhlaza. Azinabo ubuthi futhi azinabungozi futhi ngeke zingcolise imifino. Zihlanzwa ngesikhathi ukugcina ...
Ukubeka Imigqomo Yokuthatha, Imigqomo Yesitoreji Esinqwabekile, Isitaki nama-Hang Bins, Imigqomo Yesitoreji Esibekiwe Epulasitiki, Imigqomo Yokugcina Isitoreji, Imigqomo Yokugoqa Ngeplastiki,